Izandi ezenziwa ziintlanzi, ngaba ziyakwazi ukunxibelelana? | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ukuzaliswa kweentlanzi
Ngokuqinisekileyo wakhe wazibuza ukuba iintlanzi ziyakwazi ukunxibelelana kwaye zinokukwenza njani oko. Amaqela aliqela ezenzululwazi aye akuthandabuza oku kwaye enza uphando ukubonisa oko iintlanzi ziyakwazi ukunxibelelana phakathi kwabo ngeendlela ezahlukeneyo.
Kule nqaku siza kukubonisa indlela iintlanzi ezinxibelelana ngayo.
1 Izandi zonxibelelwano
2 Unxibelelwano lwentlanzi ngomchamo
3 Uvavanyo lomchamo
4 Indlela yokunxibelelana ngeentlanzi: i-acoustics
Izifundo ezahlukeneyo zibonise ukuba iintlanzi nazo zinako ukunxibelelana, ziyakwenza njalo nazo izandi ezifana nokugruma kunye noobhontsi.
Izazinzulu zaseNew Zealand zikholelwa ekubeni zonke iintlanzi ziyakuva, kodwa ayizizo zonke ezinesakhono sokwenza izandi, zinokwenza kuphela abo banesinyi sokuqubha, umsipha onokuthi ubambe.
Ukusuka kwiDyunivesithi yaseAuckland, uNjingalwazi Ghazali uqinisekisile ukuba iintlanzi ziyaqhakamshelana phambi kwemfuneko yokoyikisa iintshaba, xa zifuna isibini kwaye xa bafuna ukufumana iibheringi zabo.
Umzekelo ocacileyo yintlanzi ebomvu okanye igwinya elinakho yenza izandi ezahlukileyoEnye ethule ikhowudi, yenza isandi kuphela xa kufuneka iqabane.
«I-hypothesis yeyokuba basebenzise isandi njengesixhobo sokuvumelanisa ukuze inkunzi nemazi ikhuphe amaqanda ngaxeshanye kwaye ngaloo ndlela iphumelele ukuchumisa.«. Ezinye iintlobo ezihlala kwiingqaqa zenza ingxolo ukuthintela ukuhlaselwa ngamarhamncwa.
Intlanzi yegolide ebonwe kwii-aquariums ine- ukuva okugqwesileyo kodwa abakwazi ukubiza amagama kananjalo azinakwenza sandi.
Unxibelelwano lwentlanzi ngomchamo
Olunye uhlobo lonxibelelwano olukhoyo kwiintlanzi kunokuba ngumchamo. Kukho izifundo ezininzi kuyo, apho uphando oluvela kwiphephancwadi ye-Behaeveal Ecology kunye ne-Sociobiology. Kolu phando kuthiwa iintlanzi zinokunxibelelana ngezinye zeekhemikhali kumchamo.
Unxibelelwano ludlala indima ebalulekileyo kubomi nophuhliso lweentlanzi. Kukho iintlanzi ezininzi ezinendawo enoburharha ukuze zikhusele umhlaba wazo. Ukuseka isikhokelo ekutyikityeni indawo, unxibelelwano luyafuneka. Uphononongo lubonisa ukuba unxibelelwano lweekhemikhali phakathi kwentlanzi ludlala indima ebalulekileyo ekuhlaleni kunye. Nangona kukho omnye umqondiso ocacileyo ukuba iintlanzi ziyakwazi ukunxibelelana, ezinje ngobukho bezikolo ezinkulu zentlanzi, unxibelelwano ngemichiza lubaluleke kakhulu.
Kukho eminye imiqondiso ekhe yafundwa, enje ngeendlela zonxibelelwano ezibonwayo kunye ne-acoustic. Xa sithetha ngokunxibelelana phakathi kweentlanzi ngezinto zekhemikhali kumchamo, siyithelekisa nokuziphatha kwezilwanyana ezanyisayo. Uphando luzama ukufumanisa ukuba iintlanzi zisebenzisa umchamo ukuphawula indawo. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo imeko abahlala kuyo. Kwimeko yasemanzini, umchamo awuhlali endaweni, kodwa amanzi ayanyibilika. Amanzi, kwelinye icala, inokuba sisixhobo esifanelekileyo sokunxibelelana ngekhemistri.
Ukufumanisa ukuba umchamo udlale indima ekuhlaleni, ezinye iimvavanyo zenziwa malunga netanki lamanzi elahlulwe lisahlulelo. Kwahlelwa ukuba izilwanyana ziya kudibana ngokwasemzimbeni. Nangona kunjalo, bayila itanki ngendlela enokuthi ibonwe ngendlela yokuba amanzi avela kwelinye igumbi angadluli kwelinye igumbi. Ezinye iintlanzi ezinobungakanani obahlukeneyo zazinxibelelana, kuba le yinto ebalulekileyo ukuba umntu ufuna ukuhlalutya unxibelelwano phakathi kweembangi.
Iintlanzi zazifakelwe into ethile ukuze kungcoliswe umchamo wazo luhlaza ukuze zikwazi ukulinganiswa kunye nokuqwalaselwa. Nje ukuba kwenziwe oku, izazinzulu zaqala ukulinganisa ukuba ungakanani umchamo okhutshelwe intlanzi kwiimeko ezahlukeneyo ezazikuzo. Ukuba iintlanzi ezininzi zibonwe ngaphakathi kwetanki, baya kuphakamisa amaphiko abo basondele ngomsindo. Yintoni egqithisile, bakhuphe umchamo ongaphezulu xa kuthelekiswa nemeko apho zombini iintlanzi zazingabonani.
Utshintsho oluninzi luye lwaqwalaselwa kwiindlela zokuziphatha kweentlanzi ezijongileyo. Olu tshintsho baqwalaselwa kuphela ukuba umchamo ushenxele kwelinye icala letanki. Kule meko, ukuba intlanzi ibone enkulu, iyabunciphisa uburhalarhume bayo kwaye ithambe ngakumbi. Ukusuka apha uloyiko lokudliwa komhlaba kunye nomhlaba unokuqaqanjiswa. Ukuba umchamo awukwazanga ukudlula kwi-septum yetanki leentlanzi, akukho lutshintsho kwindlela yokuziphatha oluye lwabonwa phakathi kweentlanzi, nokuba zingakanani na.
Oku kungabonisa ukuba umchamo usebenza njengendlela yokunxibelelana ngemichiza phakathi kwentlanzi. Kungenzeka ukuba isiphelo singafunyanwa kolu phononongo lokuba iintlanzi zikhupha umchamo ngenjongo yokunxibelelana nepenchant yobundlongondlongo. Luhlobo lokuma kwendawo nganye kuhlobo ngalunye. Ezi zifundo kufuneka zenziwe kwiindidi ezahlukeneyo ukubona indlela yokuziphatha nganye nganye. Kanjalo Kuya kuxhomekeka kwixesha abakulo, nokuba kukufuduka okanye ukuzala kwakhona. Kwiimeko ezithile zonyaka iintlanzi ziziphatha ngendlela yomhlaba ngakumbi kunezinye.
Indlela yokunxibelelana ngeentlanzi: i-acoustics
I-Passive acoustics yindlela yokunxibelelana phakathi kweentlanzi ezineentlobo ezahlukeneyo zamalungu avelisa isandi. Uninzi lweentlobo zeentlanzi zinesihlunu esisebenza ngokukhawuleza kwaye sidlala ngesingqi kwibhola yokuqubha. Kubonakalisiwe phantse ukuba iintlanzi Ukukhupha izandi zezo zinesinyi sokuqubha. Ukuba sibetha ibhaluni kwaye sayibetha, siya kuvelisa into efanayo.
Ukongeza, kubonisiwe ukuba iintlanzi zinokungena kubani stridulation okanye ukukhuhlana kwezinto zethambo ezihambisa imisipha yazo okanye umoya odlulayo ngemingxunya yomzimba. Le ndlela yokunxibelelana kuye kwafuneka iphuhle umbulelo kulungelelwaniso oluthile lokusinda kwendalo yasemanzini. Xa sijamelene nohlaselo lwerhamncwa, iintlanzi kufuneka zinxibelelane nabanye ukungxama ukubaleka.
Izikolo zeentlanzi zilungelelaniswe kakuhle kwaye zixhomekeke kwiqela lonke ukuze zisinde ekuhlaselweni ngamarhamncwa. Ukujongana nongxamiseko olunje, unxibelelwano, nokuba kungumchamo okanye ukukhuhlana kwethambo, kufuneka lunikezwe ukuba luza kuphila. Masingakulibali oko iintlanzi ziyasinda ngokukwazi ukungqamanisa nokubaleka kumhlambi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nendlela iintlanzi ezinxibelelana ngayo kunye neendlela ezahlukeneyo abanazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukuzaliswa kweentlanzi » Iintlanzi ziyakwazi ukunxibelelana